Villa Borghese को माध्यम बाट पैदल यात्रा | यात्रा समाचार
रोम यो वर्षभरि सुन्दर छ, तर यसका धेरै जसो आकर्षणहरू घरको बाहिर छन्, वसन्त वा शरद fullyतु उत्तम रमाईलो हुन्। त्यसो भए यस जाडो पछाडि कसरी रोम जान र यसमा हिंड्ने बारे Villa Borghese?
पार्क, बगैंचा, झरना, पोखरी, बिभिन्न शैलीका भवनहरू, संग्रहालयहरू र अन्य आकर्षणहरू, तपाईंले रोमको यो कुनामा भेट्टाउनुहुनेछ।
2 भिला बोर्गसेमा के जानुहुन्छ
हाल यो पहाडमा छ जुन पुन: जo्गल भएको छ, पिन्सीयो पर्वतको नजिकै, र मोफोलोजी १ seven औं शताब्दीको शुरुमा पोप पल भिसका भतिजा कार्डिनल बोर्गसे र मूर्तिकार, बर्निनीको महान संरक्षकको हातमा लिन थाल्यो। धेरै प्रख्यात कलाकारहरूले परियोजनामा ​​काम गरे र १1633 सम्ममा विला तयार भइसकेको थियो।
१ XNUMX औं शताब्दीको उत्तरार्धमा, तथाकथित नोबल हाउस, आज बोर्गीज ग्यालरी, र हाउस अफ वाटर गेम्स, आज कार्लो बिलोटी संग्रहालय पूरा भयो। ताल गार्डन पनि आकार ले।
दुई शताब्दी पछि शहरको आकार बढ्यो र अन्ततःaविशिष्ट अंग्रेजी बगैचा। २० औं शताब्दीको सुरूमा, धनी बोरहे परिवारले आफ्नो भाग्य थरथर देखे र त्यो जग्गा र यसका सबै बहुमूल्य सामग्री राज्यलाई बेच्ने निर्णय गरे जसले रोम शहरमा हस्तान्तरण गर्‍यो, जसले अन्ततः यसलाई जनताको लागि खोलिदियो।
पार्क मुटुको जस्तो आकारको छ, यदि तपाईंले यसलाई आकाशबाट देख्नुभयो, र यो पियाज्ले फ्लामीनियो, तलब छिमेकी र पोर्टा पिनकियाना बीच छ। छोरा Hect hect हेक्टर सुन्दरताको जुन तपाईं दुई घण्टा वा अधिक भ्रमणको पैदल यात्रामा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ ऐतिहासिक भवनहरू, आउटडोर संरचनाहरू, संग्रहालयहरू, स्मारकहरू, झरना, ताल, बगैंचा र तालहरू।
विला बोर्गसे भ्रमण गर्न व्यावहारिक जानकारी
टर्मिनीबाट, मेट्रो लाइन A लिनुहोस् र फ्लामिनोमा बन्द हुनुहोस्। तपाईं करीव meters०० मिटर हिंड्नुहुन्छ र तपाईंसँग पहिले नै भिलामा पहुँच छ। 500 88, 490 ०,, 495 160, १ 910०, 52 १०, ,२,, 53, 628२926, २ 223,, २२217 र २१19 पनि तपाईंलाई छोड्दछ; र उही ट्राम १,, and र २ हो।
पार्क सूर्योदय देखि सूर्यास्त सम्म खुला छ।
प्रवेश नि: शुल्क हो र तपाईं केवल संग्रहालय वा भवनहरू तपाईंले भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ।
भिला बोर्गसेमा के जानुहुन्छ
La बोर्गेज ग्यालरी यो एक कला संग्रहालय हो जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो एक हो विश्व मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु। संग्रह १inal1576 र १1633 between बीच पाल भिसाको भतिजा कार्डिनल बोर्गेजले सुरु गरेको थियो। यहाँ तपाईले कामहरू देख्नुहुनेछ Bernini, उहाँ आफ्नो पहिलो संरक्षक थिए, र पनि एक बहुमूल्य संग्रह Caravaggio
भवनमा दुई तला छन्। मुख्य भुइँमा सबै छ क्लासिक प्राचीन चीजहरू र यो एक अद्भुत साइट हो किनकि त्यहाँ पहिलो १ ते century शताब्दीका टुक्राहरू आश्चर्यजनक रूपमा संरक्षित मूर्तिकलाहरू, मोज़ेक र फ्रेस्कोहरू बीच छन्। माथिल्लो तल्लामा हस्ताक्षर गरिएको कामहरू सहित ग्यालरी छ रुबेन्स, बोट्टिसेल्ली, राफेल र टिटियन.
को क्यानोभा र Bernini द्वारा मूर्तिकलाहरु तिनीहरू यहाँ मोतीहरू छन्। अवश्य पनि, राती राति भ्रमण गर्न हतार नगर्नुहोस्, तपाईंले आरक्षित गर्नुपर्नेछ खैर, त्यहाँ धेरै आगन्तुकहरु छन्। आरक्षण अनलाइन वा फोन मार्फत र धेरै दिन अघि गर्न सकिन्छ। बोर्गेज ग्यालरी मंगलबार मार्फत खुला छ आइतवार बिहान :8: .० देखि :30::7० सम्म र यसको मूल्य १ 20 यूरो छ.
यसको सामग्री पछाडि, भवन आफैंले पनि नजिकबाट हेर्न लायकको छ। यो वास्तुकार फ्लामिनिओ पोन्जियोले कार्डिनल उपनगर विला हुन डिजाइन गरेको थियो। उनको मृत्युमा कामहरू जारी राखिए वासनजियो जसले मूल डिजाइनमा सजावट थप्यो। त्यस समयमा यो एक सुन्दर मनोरन्जन स्थल थियो, धाराहरू, ताल, हिंड्ने, मोर, शुतुरमुर्ग सहित ...
तपाईंले देख्न सक्ने अन्य भवनहरू मेरिडियाना, क्यासिनो डेल ग्राजियानो, क्यासिनो डेल ओरोलियो, क्यासिनो नाबाइल वा पोर्टेजुओला हुन्। ती ऐतिहासिक निर्माणहरू हुन् र हामी यसको गोप्य बगैंचासहित कासा जिस्टिनीनी, पजारेरिया वा सौर घडी थप्न सक्छौं।
यो सहि छ, यी भवनहरूको आफ्नै प्यारा साना बगैंचाहरू छन्। ती मध्ये माथि उल्लिखित छन् गुप्त उद्यानतर पनि केराको उपत्यका, Scipione Borghese को प्लाजोलेटा बगीचा वा सुन्दर ताल बगैचा यसको सुन्दर कोलोनेडेड मन्दिर एस्कुलापियसको साथ। पछिल्लो शहरमा नवओग्लासिकल र १ th औं शताब्दीका भवनहरू मध्ये एक हो, जस्तै ओरोलियो, कासा डेल रलोज वा प्रोक्वा फोर्टालिजा।
तिनीहरूले जोड्न विभिन्न स्रोतहरू जस्तै फन्टाना देई काभल्ली मारिनी, फोंटाना डेल फिओको, डार्क फाउंटेन वा फोंटाना देइ पुपाज़ी। त्यहाँ म्यूजिओ क्यानोनिका पनि हो, जुन पिट्रो क्यानोनिकाको एक स्टूडियो घर हो, एक कलाकार, कासा डे लास रोजास वा कासा डेल सिने। यदि तपाईं बच्चाहरूसँग जानुहुन्छ भने तपाईं कासा डे राफेलो, यसको बच्चाहरूको प्लेरूमसँगै जान सक्नुहुनेछ, वा तपाईंलाई पशुहरू मनपर्‍यो भने त्यहाँ छ। रोम चिड़ियाघर वा बायोपार्को २०० भन्दा बढी विभिन्न प्रजातिका हजारौं जनावरहरूको साथ। यो इटालीको सब भन्दा ठूलो र पुरानो चिडियाघर हो, १ 200 ११ मा जन्म।
यो डिसेम्बर २ 25 बाहेक हप्ताको सात दिन र सामान्य घण्टा बिहान :9: from० देखि सबै बर्ष खुला हुन्छ। प्रविष्टि प्रति वयस्क १ 30 यूरो। तपाईं टिकट अनलाइन किन्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक आकर्षणको अर्को हो पिन्सिओ पानी घडी, १ th औं शताब्दी ईन्जिनियरि ofको एक चमत्कार।
यो एक छ हाइड्रो-घडी त्यो भित्र बनाइएको थियो 1867 डोमिनिकन पादरी द्वारा, जसले वाचमेकिंगलाई मन पराउँछन्, Giambattista Embriaco, साथै स्विस आर्किटेक्ट जोरकिम एर्सोचसँग। अचम्मको कुरा त्यो हो अझै पूर्ण अपरेशनमा १ Paris1867 मा पेरिसको प्रख्यात युनिवर्सल प्रदर्शनीमा यसको प्रस्तुतीकरण भएकोले।
तपाईं पनि एक देख्नुहुनेछ लन्डनमा शेक्सपियरको ग्लोब थिएटरको प्रतिकृति, सिल्भानो तोती ग्लोब थिएटर, एलिजाबेथन कालदेखि विशाल गोलाकार पवेलियन, मन्दिर र मंडपहरू, वर्ग र फव्वारा। र स्पष्ट रूपमा, मलाई लाग्छ कि यस यात्राको मुख्य आकर्षण पिन्सिओ बगैंचा हुनुपर्दछ किनकि यहाँबाट तपाईंसँग रोम शहरको अद्भुत दृश्यहरू छन्।
याद गर्नुहोस् कि भिला बोर्गीसको नौ प्रवेशद्वारहरू छन् वाया पिनकियाना, राइमन्डी, अल्द्रोभान्डी, पियाजाले सान पाओलो डेल ब्रासिल, पियाजाले फ्लामिनिओ र पियाजाले सेर्भेन्टेस बीच। घुमाउनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » रोम » भिल्ला बोर्गीजको माध्यमबाट हिँड्न